Umaki: izibalo zamakhasimende | Martech Zone
Umaki: izibalo zamakhasimende
NgoMsombuluko, Mashi 31, 2014 Douglas Karr
I-Leger Metrics inikeza ipulatifomu yokusiza inkampani yakho ekuqondeni kangcono ukuthi isipiliyoni sakho sekhasimende sikushayela kanjani ukwaneliseka, ukwethembeka nenzuzo kuyo yonke inkampani yakho. Ipulatifomu ye-Voice of Customer (VoC) ikunikeza amathuluzi adingekayo wokuthwebula impendulo yamakhasimende ngalezi zici ezilandelayo: Impendulo Yekhasimende - Mema impendulo yamakhasimende bese uyiqoqa ngocingo, iwebhu, i-SMS, kanye nefoni. Ukubika kanye ne-Analytics - Dlulisa imininingwane kubantu abafanele, ngesikhathi esifanele
NgoMgqibelo, Septhemba 21, 2013 NgoMgqibelo, Septhemba 21, 2013 Douglas Karr
I-Woopra yipulatifomu ye-analytics egxile kumathemba akho nakumakhasimende, hhayi ekubukweni kwamakhasi. Yipulatifomu ye-analytics eyenziwe ngokwezifiso kakhulu egxile ekuxhumaneni kwamakhasimende nesayithi lakho - hhayi nje izindlela abazithathayo. Ukuqonda okunikeziwe kungakuvumela ukuthi usebenzise idatha yesikhathi sangempela ukushayela izenzo zesikhathi sangempela. Ezinye zezici zepulatifomu ezihlukile zeWoopra: Amaphrofayili Amakhasimende - Khomba amakhasimende akho nge-imeyili bese wengeza amagama abo kumaphrofayili abo. Hlanganisa idatha yamakhasimende ngqo
Ezweni lanamuhla lezenhlalo, ukuhlanganisa ndawonye lokho okushiwo yikhasimende kubaluleke kakhulu kumikhiqizo. Ubungqabavu bungaba ithuluzi eliwusizo kulokhu okuqukethwe. Ithuluzi le-Attitude's analytics text likhipha amaqiniso, ubudlelwano, kanye nemizwa evela ku-labyrinth yezimpendulo ezitholakele maqondana nomkhankaso wokuphromotha, i-tweet, isibuyekezo se-Facebook, okuthunyelwe kwebhulogi, izimpendulo zenhlolovo - kahle, uthola ukukhukhuleka! Injini yokukhipha amandla isebenzisa imigomo yolimi evivinywe ngesikhathi semvelo futhi